U-Oppo unokumilisela i-smartphone yekhamera engaphantsi kwesikrini kulo nyaka | Zonke iinkonzo ze-intanethi
U-Oppo unokumilisela i-camera yekhamera engaphantsi komboniso kulo nyaka
Ukusukela kumaxesha akutshanje, Ukubonelela ngeyona nto ibalulekileyo yokujonga yeyona njongo iphambili yabenzi abaninzi be-smartphone. Ngenxa yoku, iindlela ezahlukeneyo ziye zaphuhliswa, ezinje nge-'dots notch ', isilayidi esivelisayo sokuphucula amava okujonga kwii-smartphones, isikrini esigqityiweyo, phakathi kwabanye.
I-Oppo iza nendlela entsha, kodwa eyahlukileyo. Ingaphehlelela i-smartphone entsha ngekhamera engaphantsi kwescreen kulo nyaka, ityhila u-tipster odumileyo uBen Geskin ngeakhawunti yakhe ye-Twitter.
Umnumzana Geskin uphinde wabelana ngomfanekiso we-smartphone engaziwayo kunye nesibhengezo esitsha, nangona engakhange akhankanye naziphi na ezinye iinkcukacha ngesixhobo. Nangona kunjalo, kunokubonwa ukuba i-terminal elandelayo inokuza nee-bezels ezincinci kunye nemidlalo uyilo olufana nezixhobo zekhamera ezivelayo.
Kulo nyaka i-OPPO izakubonisa i-smartphone enekhamera yokubonisa? pic.twitter.com/JkKoliJiZS
-Ben Geskin (@BenGeskin) Ngamana 11, 2019
Njengenzwa yeminwe yeminwe phantsi komboniso, I-smartphone elandelayo yenkampani iya kuba nekhamera entsha phantsi kwescreen sefowuni.
Impumelelo ka-Oppo kwitekhnoloji entsha yekhamera iya kuvula iingcango kuninzi lwabenzi be-smartphone. Iya kubanceda bagcine imodeli yoyilo esisiseko ye-smartphone.
Isamsung kunye nabanye abavelisi bayasebenza kwitekhnoloji efanayo yokufihla iikhamera zangaphambili.. Usekela-mongameli weSebe le-R & D le-Samsung wathi "itekhnoloji inokuqhubela phambili ukuya kwindawo apho umngxuma wekhamera ungabonakali, ngaphandle kokuchaphazela ukusebenza kwekhamera nangayiphi na indlela."
Isamsung isebenza kwiikhamera ezingabonakaliyo phantsi kwescreen
Bambalwa amalungelo awodwa omenzi wechiza anxulumene neekhamera ezingezantsi avele kwiiofisi zobhaliso lwentengiso kwamanye amazwe, kodwa luphawu oluhle lokuba zikhona.
Kusele iinyanga ezimbalwa ngaphambi kokumiliselwa kwesixhobo esitsha esivela kumenzi waseTshayina, esiya kuthi kamva kulo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » U-Oppo unokumilisela i-camera yekhamera engaphantsi komboniso kulo nyaka
UGoogle wazisa iintengiso kuVumbulula
I-Samsung Pay sele inabasebenzisi abamalunga nezigidi ezili-14 kumazwe angama-25